Margarekha वागेश्वरी एकेडेमी फाईनल चरणमा प्रवेश – Margarekha
वागेश्वरी एकेडेमी फाईनल चरणमा प्रवेश
बाँकेको कोहलपुरमा जारी बुम रेमिट जिल्लास्तरीय अन्तर स्कुल छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सेमिफाईनल चरणका खेलहरु सुरु भएका छन । जिल्लाकै सार्वाधिक पुरस्कार राशीको उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबारबाट सेमिफाईल चरणका खेलहरु सुरु भएका हुन ।
आईतबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाईनल खेलमा विजयी हुँदै वागेश्वरी एकेडेमी कोहलपुर फाईनल चरणमा प्रवेश गरेको छ । कोहलपुरस्थित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा त्रिभुवन मा.वि. कोहलपुरलाई ८४ रनले पराजित गर्दै वागेश्वरी एकेडेमीको टिम फाईनल चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
१ सय ६७ रनको ठुलो लक्ष्य पछ्याएको त्रिभुवन मा.वि. ८२ रनमै समेटीएको थियो । त्रिभुवनलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा वागेश्वरी एकेडेमीका आयुश्मान बस्नेत र प्रकाश गाहा मगरले समान २÷२ विकेट लिएका थिए । प्रतियोगितामा प्रथम अर्धशतकीय पारी खेलेका वागेश्वरी एकेडेमीका दिपेन्द्र रावत म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
यसैबिच आईतबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा तक्षशिला एकेडेमी विजयी भएको छ । आईडल पब्लिक स्कुललाई ९ विकेटले पराजित गर्दै तक्षशिला एकेडेमी विजयी भएको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको आईडलले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ६८ रन जोडेको थियो । आईडल पब्लीकका खेलाडीहरुको ब्याटिङ लाईन धराशायी बनाउने क्रममा तक्षशिलाका बलरहरु समान्त शाही, सन्जीब आर.सी., लक्ष्मण सिंह र युवराज शर्माले समान २÷२ विकेट लिएका थिए ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत आज तक्षशिला एकेडेमी कोहलपुर र श्री चन्द्र मेवालाल स्कुलबिच खेल हुने आयोजक मध्यपशिचम क्रिकेट क्लबले जनाएको छ ।
१५ माघ २०७४, सोमबार ०६:४१ प्रकाशित